Zavatra hatao amin'ny Long Train dian'i | Save A Train
Home > Travel Europe > Zavatra hatao amin'ny Long Train dian'i
Zavatra hatao amin'ny Long Train dian'i
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 19/02/2021)
A mitaingina fiaran-dalamby manery antsika miato, faly mijery ny varavarankely sy mankasitraka ny mihaja ny maka ny fotoana. Nandeha dia mahafinaritra, fa indraindray afaka mitondra ny hery rehetra, lava lamasinina diany dia afaka manapaka sy sorisory. Ataovy indrindra avy amin'ny diany - eto no ambony ny zavatra hatao amin'ny fiaran-dalamby ela nifindrafindra ny antoka rehetra dia lavitra ny miala voly sy mifaly mitaingina.
Henoy ny mozika rehefa nandray fiaran-dalamby lava dian'i
Anaovy ny écouteur, ary miadana rehefa mihaino mozika tianao indrindra. Tsy misy fomba tsara kokoa hankafy ny tarehy toerana manodidina. Haka aina sy mijery ny tontolo tsara tarehy zozoro lasa rehefa mihaino ny toerana tena mpanakanto.
Dijon an'i Paris Lamasinina
Reims any Paris Lamasinina
Lille ho any Paris Lamasinina
Tours any Paris Lamasinina
Mianara teny vahiny
Nahoana no tsy hanana fahaiza-manao vaovao eo amin'ny diany? Raha mandeha any amin'ny firenena izay miteny fiteny hafa, ela lamasinina dia manome fahafahana mba haka vitsivitsy teny sy andian-teny.
Padua ho any Venice Lamasinina
Bologna ho any Venice Lamasinina
Roma ho any Venice Lamasinina
Dia tsara ny mahalala ny fototry ny fiteny rehetra, rehefa mitsidika-tany hafa. Soa ihany, misy Apps maro ary podcasts Afaka maka ny tolotra antokony ao anatin'izany ny malaza espaniola, alemaina, Italiana, sy Anglisy fiteny.
Reading lehibe ny miala voly sy mahafinaritra foana ny fomba nitranga ny fotoana. Long miasa ora sy be atao aza hoe kely kokoa ny fotoana mety ho an'ny famakiana, Toy izany, ny lamasinina ela dia maneho fahafahana hitsambikina ao amin'ny boky na ny eBook. Raha toa ianao ka mahatsiaro ho olona kamo, ary te hanao ny mamaky ho anao, ny feo-boky lehibe hafa.
amin'ny solosaina, iPads, sy ny finday avo lenta anananao, mora mba hahitana fialam-boly onboard. Hahatratra amin'ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra amin'ny toerana tena na mijery ny horonan-tsary ianao dia efa maniry mijery.
Na misy na tsy misy WIFI, fa hevitra tsara ny misintona izay fampisehoana na sarimihetsika kasainao hijery eo anoloan'ny diany. Hahatratra eo amin'ny tena tia an-efijery tantara sy eo anatrehanao mahalala izany, ianao ho eo amin'ny toerana halehany.
Tsidiho ny cantine
Mora ny mahatsiaro ho reraka sy kamo lamasinina nandritra ny ela dia. Rehefa avy nipetraka teo lamasinina nandritra ny ora maro, dia zava-dehibe ny haninjitra ny tongotra raha azo atao. A fohy mandeha ho any amin'ny cantine dia hanampy anao hampiasa ny fotoana sy ny mba hahatsiaro recharged. Ampidino ireo kalesy mankany amin'ny cantine, jereo kely ny tontolo ary mankafy ny sasany tsindrin-tsakafo miaraka amin'ny zava-pisotro ny safidy
Hihaona ny olona vaovao eo amin'ny fiaran-dalamby ela dian'i
Nandeha lamasinina mety ho traikefa ara-tsosialy. Meeting olona vaovao amin'ny fiarandalamby moa no moramora kokoa noho ny hafa ny fomba fitaterana. Tsy toy ny fiaramanidina, manana ny fahafahana hifindra manodidina ary manao amin'ny mpandeha hafa. Tena mahavariana ny zavatra azonao ianarana avy amin'ny olon-kafa sy ny tantarany – miresaka momba ny fiainana, asa, ary mampitombo ny tamba-jotra. Ask the person next to you about the book they’re reading, manolora zava-mamy ho azy ireo, na mitokona resaka fotsiny momba ilay toerana halehany ry zareo mandeha ny. Izany dia mandalo resadresaka ianao raha Eoropa nandeha lamasinina izay mahatonga fahatsiarovana maharitra.
Lyon any Marseilles Lamasinina
Bordeaux ho Marseilles Lamasinina
Manamboara ho an'ny manaraka dian'i ela fiaran-dalamby
Ny nandehanany no ela fiaran-dalamby fotsiny ihany indraindray ny fotoana tony mandritra ny diany. Mety ho vintana mahafinaritra ho anareo mba refuel ka manamboara ho an'ny voafidy toerana halehany. Zava-pisotro be dia be ny rano, mihinana sakafo, ary raha azo atao, matory. Ny fampiasana ny fiaran-dalamby ela dia amim-pahendrena dia hanampy anao hahatsapa velombelona sy nanome herim-- vonona ho an'ny manaraka toerana halehany.
Inona no ataonao mandritra ny ela nandehanany fiaran-dalamby? Aoka isika hahafantatra amin'ny alalan'ny nibitsika antsika amin'ny @SaveATrain! , Azonao atao ny mahita ny hafa fantsona ara-tsosialy ao amin'ny Saveatrain
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthings-long-train-journeys%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / en ny / na / nl sy ny maro hafa fiteny.
Miasa mafy aho sy ny olona liana tamin'ny traikefa nandritra ny taona maro amin'ny zavatra rehetra-bahoaka nomerika sy ny fifandraisana ara-barotra. Nandritra ny isan'ny taona farany, Efa dehibe ny fahaiza-manao eo amin'ny faritra ihany koa ny mandeha ka noho izany dia nanomboka nanoratra afa-po ny olona toy izany dia afaka mankafy ny an'izao tontolo izao araka izay ataoko. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
5 Antony hanitsaka Alina Lamasinina In Eoropa
Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
Torohevitra toro-lalana amin'ny fiara, Nandeha lamasinina, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Greece, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe, Travel Iceland